"Nazik" (spray): imiyalelo yokusetshenziswa, ukubuyekezwa
Ngesikhathi sokugula, umuntu uvame ukuthatha izidakamizwa ezithile. Izidakamizwa zephunga zingahle zihluke ekusebenzeni nasekubunjweni. Ezinye zazo zihloselwe ukubhujiswa kwamagciwane. Ezinye zibhekwa njenge-antiviral futhi zandisa ukwelashwa. Kanti ezinye zenzelwe ukugeza izono zomzimba. Okwesine kuqeda izimpawu zokungabi namagciwane futhi kunciphisa ukuvuvukala.
Enye yemithi "i-Nazik" (i-spray). Imiyalo, ukubuyekezwa ngakho, kanye nolunye ulwazi oluthe xaxa luzokwethula ukunakwa kwakho kulesi sihloko.
Ukwakhiwa kanye nohlobo lwemithi
Imiyalo yokusetshenziswa inikezani mayelana nomuthi "Nazik" (spray)? Isifinyeto sithi le mithi inezinto ezimbili eziyinhloko - i-dexpanthenol ne-xylometazoline. Kunezinye izingxenye ezengeziwe. Noma kunjalo, akudingekile ukwelashwa, kodwa ukuthola ukwakheka okufanayo.
Isidakamizwa sitholakala emafomu amabili aphambili. Lokhu kungukuhlanza kwezingane kanye nomuthi kubantu abadala. Zihluka kuphela okuqukethwe kwe-xylometazoline. Ngakho-ke, lapho umuthi omdala okuqukethwe kwawo ngu-0.1 milligram. Ngenkathi isisombululo sezingane yingxenye leyo. Kuzo zombili kokubunjwa, ama-milligram angu-5 we-dexpanthenol akhona.
Inhloso yalesi sidakamizwa: izinkomba
Kuziphi izimo ezidingekayo ukusebenzisa imithi "Nazik" (spray)? Imfundo ithi imithi ingasetshenziswa njengesidakamizwa esizimele noma ekwelapheni okuyinkimbinkimbi. Izinkomba eziyinhloko zokwakheka kobunjwa yizimo ezilandelayo:
Izifo zesimiso sokuphefumula, ezibonakaliswe ukucinana komzimba, ukuhlukana okuningi kwe-mucus;
I-Rhinitis ye-etiology ehlukene, kuhlanganise nokungapheli;
Izifo ze-adenoids nezinkinga zabo;
Imithi ingasetshenziselwa ukulungiselela ukungenelela kokuhlinzwa. Ngemuva kwezinqubo ezinjalo, i-spray inqunyelwe ukuvimbela izinkinga.
Ukulinganiselwa kanye nokuphikisana kwezinhlangano
Yini enye engayitshela mayelana nomuthi "Nazik" (spray) imfundo? Imithi ayinqunyelwe izingane ezingaphansi kweminyaka emibili ubudala. Uma kunesidingo, sebenzisa lesi sidakamizwa kufanele nje sidilize. Ukwakhiwa kumthamo omdala akukhuthazwa abantu abangaphansi kweminyaka eyi-10 ubudala.
Ukubunjwa akunikezwa iziguli ezine-pathologies ye-gland yegciwane kanye nezitho zombono. Kufanelekile ukuyeka ukuphathwa okunjalo kulabo abanezinkinga ngenhliziyo nemithambo yegazi. Ukuphulwa komfutho wegazi kungukuphikisa okuqondile ekusetshenzisweni kokubunjwa.
Umuthi awunqunyelwe ngesikhathi sokukhulelwa kanye ne-lactation. Kodwa-ke, abanye odokotela bangasikhuthaza lesi sakhi. Kulokhu, udinga ukucabangela zonke izingozi bese uqapha ngokucophelela isimo sowesifazane.
"Nazik" (spray): imiyalo yokusetshenziswa kwabantu abadala
Imithi itholakala kumbhalo ngamunye wezinyosi ngomthamo owodwa. Okusho ukuthi, ku-nostril owodwa udinga ukuphenya lesi sidakamizwa kanye. Ukuphindaphindwa kwesicelo kungafinyelela izikhathi ezingu 4 ngosuku. Nokho, lokhu akudingeki ngaso sonke isikhathi. Mayelana nomuthi "Nazik" (i-spray), imfundo ithi isebenza amahora angama-10.
Inkambo yokwelashwa ngemithi yabantu abadala ivela ezinsukwini ezintathu kuya kwezinsuku ezinhlanu. Emva kwalesi sikhathi, ungasebenzisi lesi sidakamizwa. Lokhu kugcwele imiphumela.
"Nazik" (spray for kids): imfundo ekusetshenzisweni kwemithi
Kuzingane, imithi isetshenziswa kuphela emithini efanele. Ngaphandle kwalokho, imiphumela emibi kakhulu ingenzeka. Imithi ijojowe emakhaleni ngalinye ngesilinganiso esisodwa. Ungaphinda ukuxhaphaza izikhathi ezintathu ngosuku.
I-spray yezingane ingasetshenziswa kuze kube ngesonto elilodwa. Odokotela bathi lokhu akudingeki ngaso sonke isikhathi. Ngokuvamile, ungamisa umuthi ngosuku lwesithathu.
Izenzakalo ezimbi kusukela ekusebenziseni izidakamizwa
Yiluphi olunye ulwazi olwenziwe imilayezo yesidakamizwa esithi "Nazik" (spray)? Ukwakhiwa kwezingane ngokuvamile akubangeli ukuphendula okungalungile, ngoba kubonisa isilinganiso esincane kakhulu semithi. Noma kunjalo, leli fomu lithandwa kakhulu phakathi kweziguli abadala. Imithi ibekezelela kahle uma yonke imithetho yesicelo ibonakala. Noma kunjalo, uma imfundo iphulwa, kungase kube nemiphumela emibi.
Ngokuvamile, iziguli zikhononda ngokuma futhi zivutha emaqenjini angasese. Ngokusetshenziswa isikhathi eside, ukuqina okuhlala njalo kungenzeka. Kulokhu, sikhuluma ngokujwayela izidakamizwa. Ngaphezu kwalokho, iningi labo lingavele lenze imiphumela emibi njengokwephula isigqi senhliziyo, ukwanda kwengcindezi yegazi, ukukhushulwa kwezifo zamehlo njalonjalo.
Impendulo mayelana nokubunjwa
Imibono ekulungiseleleni "Nazik" yayinempilo. Into esebenzayo xylometazaline ithinta i-mucosa yezingxenye zomzimba. Ngenxa yalokho, izitsha zihlangana futhi i-edema iyanyamalala. Abathengi babika ukuthi ukuphefumula okujwayelekile kuvuselelwa ngaphakathi kwemizuzu embalwa yomthamo. Lo mphumela uhlala cishe amahora ayishumi. Yilokho okufundiswayo. Kodwa-ke, ezigulini ezinezifo ezinzima futhi ezivuvukala kakhulu, lesi sidakamizwa singagcina amahora ayisithupha kuphela.
Esinye isici salesi sidakamizwa, esibonisa ukubuyekezwa okuhle, ukuthi iqukethe i-dexpanthenol. Lesi sici sinomthelela ekuthungeni okulula okuthungayo kwe-mucosa yomzimba. Ivuselela futhi ilungise izicubu ezilimele. Umphumela ukungakwazi kwamagciwane kanye nama-virus ukungena ezindaweni ezithintekile. Kumele uqaphele ukuthi le mfanelo yenza kube lula ukusebenzisa imithi emva kwezinsiza ezahlukene zokuhlinzeka.
Odokotela babika ukuthi, naphezu kwazo zonke izici ezinhle, ukwakheka akukwazi ukusetshenziswa isikhathi eside. Ngokusebenzisa isikhathi eside kanye nokulinganisa okukhulu, i-atrophy ye-mucosa yangasese iqala. Ngenxa yalokho, umuntu uyaphela ukunuka futhi akakwazi ukuphefumula ngaphandle kwalesi sidakamizwa. Yingakho odokotela batusa ukuthi banamathele kuzo zonke izinhlelo ezichazwe emiyalweni.
Uqaphele ulwazi olubikwe kumuthi wezidakamizwa othi "Nazik" (spray). Isithombe somuthi sinikezwa ukunakwa kwakho kulesi sihloko. Ngaphambi kokusebenzisa lezi zinhlanganisela, kufanelekile ukuvakashela udokotela bese uthole izincomo. Ungasebenzisi ukubunjwa okuchazwe ngokwakho. Kuvinjelwe ukwandisa umthamo wesidakamizwa futhi uyisebenzise isikhathi esingaphezu kwesonto elilodwa ngokulandelana. Khumbula ngokuphikisana nemiphumela emibi. Unamandla kuwe impilo nokuphefumula kalula!
Ukudlula ngokweqile kwe-Paracetamol: izimpawu, imiphumela. I-Paracetamol ngokweqile ezinganeni
"Nazol Baby" - ikhambi elihle kakhulu elibandayo kubantwana
Iziphi izimo umuthi "Diazolin" olawulwa ngesikhathi sokukhulelwa
Amathiphu ambalwa sendlela ukuthandana nendoda-ka Taurus
Ngaya eYoshkar-Ola, club "Stone": izithombe kanye nokubuyekeza
Yini eyenza itiyela? Izakhiwo kanye nezicelo of itiyela
Bursitis we ngokuhlanganyela indololwane: ukwelashwa, izimpawu kanye izimbangela
Kuyini yokucucuza futhi kanjani ayibulale?
Kare emlenzeni nge isandiso (isithombe)
A. S. Pushkin "Ndodakazi uKaputeni sika". Kumiswa umuntu Petra Grineva